Vacos Mucheche Monitor, kuongorora uye kuita | Gadget Nhau
Vacos Mucheche Monitor, kuongorora uye kuita
Rafa Rodríguez Ballesteros | 01/09/2021 20:00 | Yakagadziridzwa ku 31/08/2021 23:50 | Reviews
Tadzoka muActualidad Gadget ne ongororo yemhuri, kunyanya kumhuri dzine vacheche. Tekinoroji yakauya muhupenyu hwedu kuita kuti zvive nyore kwatiri. Uye yevabereki vane vacheche mumba, chero rubatsiro rwushoma. Nhasi tinotaura nezve iyo Empty Mucheche Monitor, kamera yekutanga kuitira kuti usarase tsananguro yediki diki eimba.
Pane mikana isingaperi pamusika kana uchitsvaga mucheche wekutarisa kamera. Nhasi Isu tinokuudza zvese nezve chikumbiro cheVacos. Kamera yekuchengetedza yakakwana ye dzora vacheche vane vhidhiyo, odhiyo, chiratidzo cheusiku uye zvimwe zvakawanda kupfuura vamwe vanokwanisa kupa.
1 Vacos Baby Monitor, mwana wako akachengeteka
2 Unboxing Vacos mucheche Monitor
3 Kamera uye dhizaini dhizaini
4 Vacos Baby Monitor Zvimiro
4.1 Zvese zviri pasi pesimba "
5 Zvakanakira nezvayakaipira zveiyo Vacos Baby Monitor
Vacos Baby Monitor, mwana wako akachengeteka
Tichitarisa iyo Chimiro, iyo Vacos Baby Monitor kamera, iri zvakafanana nemamwe makamera ekuchengetedza kuti takakwanisa kuratidza. Makamera akagadzirirwa rumwe rudzi rwekutarisa, senge dzimba dzedu kana mabhizinesi. Kunyangwe tikatarisa Mune mabhenefiti ainayo, tinowana misiyano yakakosha. Iyi ndiyo monitor yemwana iwe yawaitsvaga here? Batisisa icho Empty Mucheche Monitor pane iyo yepamutemo webhusaiti pamutengo wakanakisa.
Tinogona kutaura kuti zvinonyanya kusiyana nezvatinowana vhidhiyo yakavharwa yedunhu sezvo tine vhidhiyo transmitter, kamera, uye chinogamuchira chiratidzo, senge skrini, kwavari madhairekitori anodikanwa kumisikidza nekushandisa kwayo. Iyo 100% yakachengeteka dunhu uye isina kubva kunogoneka hacks.
Unboxing Vacos mucheche Monitor
Ino ndiyo nguva yekutarisa mukati mebhokisi remucheche unoongorora "kit". Sezvataona kare, tinowana zvinhu zviviri zvakakosha se iyo vhidhiyo kamera pachayo, chena uye yakagadzirwa nemapurasitiki ine gloss apedza. Uye iyo tarisa ne screen uye mabhatani ekudzora.
Isu zvakare tine zvimwe zvakakosha zvinhu zvekushandisa senge cables. Tine tambo yazvino yekamera, uye mumwezve yekuchaja bhatiri tarisa. Zvese ne USB Type-C fomati. Zvakare maadapter maviri emagetsi kune imwe neimwe tambo.
Raira apa yako Empty Mucheche Monitor nemutengo wakanakisa pane webhusaiti yepamutemo
Pakupedzisira, tinowana chishongedzo icho chinoshandiswa kukwenya vhidhiyo kamera kumadziro yakatarisana nekwatinokodzera. Vadiki zvekushongedza ruzivo izvo zvinopa iyo kamera kutaridzika sekwemwana iyo yatinogona kuisa pamusoro payo; maviri maviri e pink uye yero nyanga. Uye senguva dzose, a diki mushandisi gwaro uye warandi zvinyorwa yechigadzirwa.
Kamera uye dhizaini dhizaini
Sezvo isu tataura, kamera inogona kunyatso kurapwa imwe yeanotarisa makamera atakakwanisa kuyedza. Iyo ine cylindrical base panogara chimwe chikamu chakatenderedzwa iyo lens inosanganisirwa. Asi zvakadaro, tinowana zvinhu zvinozvisiyanisa, senge kanyanga, kana mukana wekuzvigadzira pamwe nezvimwe zvekushongedza izvo zvinowanikwa mubhokisi.
Ane maikorofoni uye zvakare nemutauri, saka yakagadzirirwa bi-inotungamira kurira. Pasina kupokana zvinobatsira kwazvo kugona kutaura nemwana nguva dzese kana akamuka kana kana tichida kutaura naye pagudzanzwi kuti tidzikame. Iyo lens inoratidzira HD 720P resolution uye ne yakanakisa chiratidzo chehusiku iyo inonunura yakapinza mifananidzo mune chero mwenje, kana kusipo zvachose.
El tarisisa iyo inodzora kamera ine 5 inch LCD skrini. Pamberi, la la derecha yeiyo skrini, tinowana iyo mabhatani enyama iyo inoshanda kudzora mashandisiro avo.
In the shure, pamwe ne eyelash zvinoshanda saka tinogona kumusimudza, tinowana kanyanga kuitira kuti chiratidzo chibudiswe uye chigamuchire nekujeka kuri nani. Pazasi ane memory kadhi slot inosvika pa256 MB yekuyeuka kwatinogona kuchengeta zvakarekodhwa.
Vacos Baby Monitor Zvimiro
Inguva yekukuudza nezve zvikonzero zvikuru zvinoita kuti iyi Vacos Baby Monitor ive sarudzo yakanakisa pamusika kuisarudzira. Sezvatakakuudza kare, iyo design, kunyangwe iri yakafanana neiyo "yakajairika" kamera yekutarisa, iri zvinoyevedza, zvemazuva ano uye haingapesani mune chero nzvimbo.
Kutenda kune iyo yekutarisa menyu isu tinogona nyore kuve neese anodikanwa madhiraivhu kuti uwane zvakanyanyisa kubva mukushandisa kwayo. Uine bhatani rakananga, tinogona gonesa kana kudzima kamera, kana maikorofoni kutaura nemucheche kana kugona kunzwa kana mwana ari kuchema. Nemabhatani ari munzvimbo yepakati tinogona kutenderedza kamera kusvika pamadhigiri makumi matatu nemashanu uye nekuifambisa neinosvika kumadigiri makumi mashanu nemashanu ekurereka. Isu tinogona zvakare kuswededza mumufananidzo pamwe nepakati bhatani ne 1,5X zoom inosvika 2X.
Izvo hazvigoneke kuwana akafa magumo ayo edu Vacos Mucheche Monitor isinganyore. Iine Monitor tinogona kubatanidza kusvika kumakamera mana akasiyana izvo zvatinogona kudzora nenzira imwecheteyo. Nekudaro tichava nemifananidzo yekona yega yega yekamuri yekurara yemukamuri iyo yatiri kuda kuiisa. Zvese kuchengetedzeka kwauri kutsvaga muchigadzirwa, uye izvo unogona kutenga izvozvi pane yayo yepamutemo webhusaiti.
Zvese zviri pasi pesimba "
Sensors iyo kamera ine riite rizere rakazara uye rinoshanda 100% kutipa ruzivo rwakakwana. Tine chinzwa chekufamba zvinozoita kuti monitor imuke tione kuti mwana amuka here kana kuti ari kungofamba-famba panguva yekurara. Nenzira imwecheteyo, iyo inzwa inonzwika inotangisa kamera uye kuongorora kana mwana akachema.
Imwe yei sensors zvinoita kuti Vacos Baby Monitor isiyanane nedzimwe nzira dzese tembiricha. Iyo kamera inokwanisa kutipa ruzivo nezve tembiricha pane iyo imba yacho. Nenzira iyi tichaziva nenzira yakapusa kana zvichidikanwa kuisa kupisa kana zvinopesana, kuti tembiricha yakakwira.
Iyo Vacos Baby Monitor ine iyo mukana wekunyora mifananidzo. Kwete chete iyo inotipa isu rarama kutepfenyura, kana tichida, tinogona kuunza Micro SD kadhi inosvika pa256MB yekuchengetedza pavhidhiyo. Tichava nechiratidzo chakajeka uye chisina kuchekwa ne kure kusvika pamamita mazana matatu kubva kukamera kuenda kune yekutarisa, tinogona kutenderera imba pasina matambudziko.
Chinhu chakakosha ndechekuti iyo Vacos Baby Monitor haudi iyo smartphone, saka isu hatife takafanira kuisa kunyorera. Kana internet yekubatanidza haina kukosha yekushandisa, chiratidzo chinoburitswa nekamera chinongowanikwa necomputer pachayo. Pasina maApplication kana internet, mifananidzo yedu yakasununguka kubva kuvabiridzi.
Zvakanakira nezvayakaipira zveiyo Vacos Baby Monitor
El 5 inch screen saizi uye 720p resolution
Nyore de kumeso kubva panguva yekutanga uye kuita kwakawanda kwesarudzo
Sensors, kurira, kufamba uye kupisa
Yakanyanya nyore kushandisa
Pasina internet pane dzimwe nguva mavakirwo eimba unogona kuisa chimwe chipingamupinyi
Mutengo yakakwirira kupfuura avhareji
Empty Mucheche Monitor
Yakatumirwa pa: 1 September we2021
Kugadziridza kwekupedzisira: 31 August 2021
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Reviews » Vacos Mucheche Monitor, kuongorora uye kuita
HyperX Alloy Core keyboard uye Pulsefire Core mbeva, shamwari dzakanaka dzemitambo [SWEEPSTAKES]
Philips inogadzira ayo Hue mwenje kutamba kune kurira kweSpotify